DPF विकल्प | DPF सफाई र पुनर्स्थापना सेवाहरू। DPF सफाई .95 मा शुरू हुँदैछ
हाल अनुक्रमणिकामा सेट गरियो
हाल पछ्याउन सेट गरियो
DPF सफाई / पुनर्स्थापना सेवाहरू
DPF र DOC Recore
किन DPF विकल्पहरू
पुन: प्रयोग कार्यक्रम
DPF सफाई उपकरण
लाइफटाइम प्रदर्शन वारेन्टी
EPA अनुपालन डेटाबेस
DPF वैकल्पिकले OEM स्वीकृत वायमेटिक, बेक सेवाहरू र पूरा DPF पुनर्स्थापन प्रस्ताव गर्दछ। अमेरिकाको उत्तम विकल्प DPF चालु क्लिनर राख्नको लागि।
सेवा स्थानहरू वा उद्धरणको लागि कल गर्नुहोस् 833.373.2583 ext: ०
किन DPF विकल्प छनौट गर्नुहोस्?
DPF वैकल्पिकहरु मा प्रशिक्षित र प्रमाणित DPF पेशेवरहरु को साथ मासिक खोल्ने स्थानहरु छन्।
हामी कुनै पनि सफा वा पुनः भण्डार गर्दछौं DPF प्रणाली नयाँ लागत को एक अंश मा ग्यारेन्टी परिणामहरु को साथ मनपर्दछ। हाम्रो DPF सेवाहरूको साथसाथै हामी पनि प्रस्ताव गर्दछौं डाक्टर (डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक), SCR (चयनित उत्प्रेरक घटाउने) र EGR (निकास ग्यास पुनर्संरचना) सफाई र बहाली। 833.737.2583 ext: ०
१ ब्रान्ड, १ नाम, समान सेवा, समान उपकरण = सेवामा स्थिरता र राष्ट्रव्यापी गुणस्तर
२h घण्टा देखि h 24 घण्टा सम्ममा
नि: शुल्क पिक-अप र वितरण
ग्यारेन्टी परिणामहरू वा तपाईंले भुक्तान गर्नुहुन्न
ग्यारेन्टेड परिणामहरू सयौं, हजारौं, वा लाखौंलाई DPF प्रतिस्थापनमा बचत गर्दै। 3mo, 6mo, 1yr, र आजीवन वारंटी विकल्पहरू उपलब्ध छन्। भिन्नता अनुभव गर्नुहोस्। हामी अमेरिकाको DPF सफाई र बहालीको लागि उत्तम विकल्प हो। 833.737.2583 ext.0
DPF (डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर) किन सफा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ?
पहिलो पटक DPF सफा गरेर त्यसलाई कायम राख्दा तपाईलाई अत्यन्त महँगो र अनावश्यक ब्रेकडाउनबाट बचाउँछ। अब पहिले भन्दा धेरै, यदि तपाईं DPF प्रणाली राम्रोसँग कायम गर्नुभयो भने तपाईं सजिलैसँग cat १०,००० देखि ,1 ,10,000०,००० सम्मको विनाशकारी असफलताहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै मजाक छैन। यो व्यक्ति नहुनुहोस्। यहाँ DPF वैकल्पिकमा हाम्रो उपकरण, प्रक्रिया, र स्वामित्व एसएल १०० समाधानले DPF लाई OEM चश्मामा पुनर्स्थापना गर्दछ। हाम्रो वारेन्टी अनुपम र उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो हो। हामी तपाईंलाई धेरै नराम्रो DPF दिनहरूदेखि जोगाउनेछौं। 833.737.2583 ext.0
DOC (डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक) सफा गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
DOC (डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक) उचित DPF प्रकार्यका लागि महत्वपूर्ण छ। यो DPF को सीधा अपस्ट्रीममा बस्दछ। यदि यो DPF को रूपमा एकै समयमा राम्रोसँग सेवा गरिएको छैन भने- यसले समयपूर्व DPF प्लग गर्न सक्दछ। ध्वनी जटिल छ? हामीलाई व्याख्या गर्न अनुमति दिनुहोस्। यदि डीओसी कालिखोला संचय छ र तपाईं नयाँ DPF वा सफा DPF स्थापना गर्नुहुन्छ त्यस कुराको लागि, DOC बाट सबै कालिखोरा सिधा DPF मा जान्छ जुन DPF लाई ब्याक अप गर्न को लागी हुन्छ। यो यस उद्योगका धेरै कारणहरू मध्ये एक हो कि ग्राहकहरूले ईन्जिन लाइटहरू, कम सुस्त पावर, र DPF प्रतिस्थापन वा सेवाको लगत्तै अतिरिक्त लागतहरूको अनुभव गर्दछ। यो हामी सबैको लागि ठूलो टाउको हो! मलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईं बच्चाको डायपर परिवर्तन गर्नुहुन्न र त्यसको पछाडि मिल्नुहुन्न तपाईं हुन्थ्यो? म आशा गर्दिन सफा गर्नुहोस्, पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, वा DPF बदल्नुहोस् DOC सेवा बिना नै। दुबै DPF र DOC ल्याउनुहोस् र हामी निश्चित गर्नेछौं कि तिनीहरू OEM चश्मामा पुनःभण्डारण गरियो। 833.737.2583 ext.0
किन SCR (चुनिंदा उत्प्रेरक घटाउने) सफाई महत्त्वपूर्ण छ?
यो एक मुश्किल छ। SCR (छनौट उत्प्रेरक रिडक्शन) ले देश भरमा गम्भीर मुद्दाहरू निम्त्याइरहेको छ। डाईग्नोस्टिक्स र SCR प्रतिस्थापनहरूमा मालिकहरूको अरबौं डलर लागत। SCR DPF को डाउनस्ट्रीममा बस्दछ। सामान्यत: पश्चात अभिमुखीकरण निम्न अनुसार हुन्छ: DOC, DPF र SCR। केहि समयको लागि र अहिलेसम्म मानिसहरूले भन्छन्, "तपाईं SCR सफा गर्न सक्नुहुन्न"। हामी उनीहरूलाई गलत छन् भन्न गइरहेका छैनौं र हामी सही छैनौं भन्न गइरहेका छैनौं। हामी के भन्नेौं यो हो- हामीले डेट्रोइट १ बक्स प्रणाली सहित ठूलो सफलताका साथ हजारौं एससीआर प्रणालीहरू भरी भट्टीहरू सेवा गरेका छौं। केवल हाम्रो प्रक्रियाले निकास ग्यासहरूको उचित वितरणमा बाधा उत्पन्न क्रिस्टलाइज्ड डीईएफ निक्षेपहरू हटाउन सक्दछ (यसैले उत्प्रेरकलाई कम (NOX) लाई पुच्छर पाइपबाट शून्यको बाहिर कम गर्न मद्दत गर्दछ) हामी यसलाई उत्प्रेरकलाई हानी नगरी गर्न सक्दछौं। SCR प्रतिस्थापन गर्नु भन्दा पहिले $ 1 वा अधिक हामीलाई कल दिनुहोस्। हामी यसलाई OEM विवरणमा पुन: भण्डार गर्नेछौं वा तपाईं केवल तिर्नुहुन्न। 833.737.2583 ext.0
DPF प्रणाली हामी सेवा:
कमिन्स DPF, भोल्भो DPF, म्याक DPF, डेट्रोइट DPF, फोर्ड DPF, Dodge DPF, Duramax DPF, Kubota DPF, जोन डीयर DPF, Caterpillar DPF, Hino DPF, Isuzu DPF, हुस DPF, BM, VMA DPF, मर्सिडीज DPF, JCB DPF, Hatz DPF, Doosan DPF, Roadwarrior DPF, Skyline DPF, Dinex DPF, Durafit DPF, Maxfilter DPF
तपाइँको DPF देख्नुहुन्न? हामी अझै यसलाई सफा गर्दछौं। 833.737.2583 ext.0
उद्योग हामी सेवा:
खनन DPF, निर्माण DPF, कृषि DPF, ट्रान्जिट DPF, OTR DPF, प्रकाश / मध्यम र भारी शुल्क DPF को लागि यात्री। तपाइँको उद्योग देख्नुहुन्न? हामी अझै यसलाई सेवा दिन्छौं। उद्धरणको लागि कल गर्नुहोस्। 833.373.2583 ext.0
~ क्लीनर अब चलाउनुहोस् ™ ~
हाम्रा ग्राहकहरू हामीलाई के भनिरहेका छन् पढ्नुहोस् :
आश्चर्यजनक सेवा हात तल
“मैले भनेको सबै कुरा वाह हो। हामीले DPF विकल्प प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छौं, हामी बचत गर्दैछौं र हाम्रो तल्लो लाइनमा थप्दैछौं। DPF वैकल्पिक मूल्य निर्धारण सर्वश्रेष्ठ हो, अधिक पिक अप र डेलिभरी - केवल एक अद्भुत सेवा हात तल। हामी तपाइँलाई तपाइँ र तपाइँको बेमेल सेवाहरूको बारेमा सबैलाई थाहा दिनेछ। फेरि पनि धन्यबाद।"
खेल परिवर्तन गर्दै
"DPF वैकल्पिक खेल DPF फिल्टर सफाईमा परिवर्तन गर्दैछ। म खुशी हुन सक्दिन। मसँग फिल्टर सहित सबै १२ ईजेक्स छ। मेरो फ्ल्याट अटलान्टा र डीपीएफ वैकल्पिक वाणिज्य शहरबाट बाहिर छ, कोलोराडोले मेरो सबै सफाईहरू पाउने छ किनकि मेरो ट्रकहरू कोलोराडो हुँदै बित्दैछन्। म पहिले जस्तो सफा गर्दै थिएँ त्यतै म कहिल्यै फर्कने छैन। ”
मेरो ट्रक एकदम राम्रो चलिरहेको छ !!!
“मसँग २०० 2008 फोर्ड एफ 350० छ। DPF प्लग अप भयो। मैले यसलाई डिलरमा लगें, एक हप्ता पर्खिए पछि उनीहरूले मेरो ट्रकलाई भित्र निकाले। तिनीहरूले मलाई भने कि मेरो उत्प्रेरक क्र्याक भएको थियो र प्रतिस्थापन आवश्यक छ, साथै डीपीएफ पनि प्लग गरिएको थियो र बदल्न आवश्यक छ। मलाई ढोका बाहिर लगभग K 4K खर्च गर्ने थियो। म अनलाइन भयो र मेरो विकल्पहरू खोजी। लामो कथा छोटो छ, उसले मेरो डीपीएफ सफा गर्यो, उसले मेरो उत्प्रेरक सफा गर्यो - उही डिलरले भनेका थियो क्र्याक थियो र बदल्न आवश्यक छ। मँ ढोका बाहिर थियो $ 1000 अन्तर्गत केहि अतिरिक्त मैले उनीहरुसँग गरें। र मेरो ट्रक एकदम राम्रो चलिरहेको छ !!! "
सिरेमिक नयाँ जस्तै थियो
“मैले स्वीकार्नुपर्दछ, म तपाईको अल्ट्रासोनिक डिजेल पार्टिकुलेट फिल्टर सफाई विकल्पको बारेमा अलि शंका गर्थें। तर यो गरिसकेपछि, म आनन्दित हुन सक्दिन। मैले कहिले पनि DPF यो सफा फिर्ता फिर्ता ल्याएको छैन, सिरेमिक नयाँ जस्तै थियो, तपाईले भनेको जस्तो। हामीले तपाईंको सेवा प्रयोग गर्न सुरु गरेको हुनाले हाम्रा ट्रकहरूले लगभग बढि रिगेन गर्दैनन् र मैले गरेको सफाइको भन्दा लामो समयसम्म चलेका छन्। फेरि पनि धन्यबाद।"
सेवा स्थानहरू र अधिक प्रत्येक महिना खोलिँदै
DPF वैकल्पिक फ्रेन्च अवसरहरू
DPF वैकल्पिकसँग धेरै बजार छिटो बिक्रीको साथ फ्रेंचाइजी अवसरहरू छन्। यदि तपाईं अत्यधिक लचिलो, र छिटो बढ्दो आला बजारमा सम्मिलित हुन चाहनुहुन्छ भने, DPF वैकल्पिक परिवार सँधै ठूलो टीमको खेलाडीहरू खोजिरहेको हुन्छ जो फरक पार्न चाहन्छ।
पूर्ण सेवा डिजेल मर्मत पसल मालिकहरू- यदि तपाईं हाम्रो उपकरणमा कुनै COST प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्।
हाम्रो VP, क्रिस Buryi (435 817) 3828१P--XNUMX at Contact मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक DPF सफाई = उत्कृष्ट उत्सर्जन समाधान
अत्याधुनिक DPF सफाई उपकरण
DPF वैकल्पिकहरू तपाईंको आफ्टरट्रीमटमेन्ट पार्ट्स आपूर्तिकर्ता हो
बजेट अन्तर्गत फ्लीटहरू राख्नुहोस्
DPF विकल्पहरू : एक क्लीनर भोली
तपाईंको गाडीको डीजल पार्टिकुलेट फिल्टरले वातावरणको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ, र हाम्रो स्वामित्व अल्ट्रासोनिक DPF सफाई प्रक्रिया तपाईंको वालेटको सुरक्षा गर्दछ। हाम्रो अल्ट्रासोनिक DPF सफाई सेवा DPF मा हरेक सेल राम्रो सफाको लागि मात्र प्रमाणित विधि हो नयाँ शर्त मनपराउन। DPF विकल्प 'सफाई प्रणाली तपाईंको फिल्टरको उपयोगी जीवनको विस्तार गरेर लागत कम गर्दछ। हामी हाम्रो टेक्नोलोजीमा यति विश्वस्त छौं, हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई नो-परेशानी, उद्योग अग्रणी, एक बर्षको प्रदर्शन ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्दछौं।
हाम्रो उच्च सफाई प्रक्रिया OE विशिष्टताहरूमा घटकहरूलाई पुनर्स्थापित गर्दछ; ग्यारेन्टी राम्रो ईन्धन अर्थव्यवस्था र हरेक DPF फिल्टर बाट अधिक उपयोगी जीवन। हाम्रो प्रमाणित अल्ट्रासोनिक सफाइ विधिले निर्मित कालिखान र खरानी तोड्न प्रति सेकेन्ड लाखौं आवेगमा स्वामित्वको उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगहरूको प्रयोग गर्दछ। हाम्रो विशेष रूपले तयार गरिएको समाधान कणहरू टाढा फ्लश गर्दछ र तिनीहरूलाई सेल भित्तामा फिर्ता आउनबाट रोक्दछ। DPF वैकल्पिकले महँगो OEM प्रतिस्थापनको विकल्पको रूपमा राम्रो DPF सफाई सेवा प्रदान गर्दछ।
- सफाई उपकरण DPF चालु क्लीनर लामो राख्न डिजाइन गरिएको -
इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्समा लाइफटाइम ग्यारेन्टी: योग्य खरीददारहरूको लागि १००% वित्तपोषण
उपकरण प्याकेज लागत कमबाट उच्चसम्म। सबै प्याकेजहरूले तपाईंलाई DPF लाई नयाँ अवस्थामा पुनःस्थापना गर्न अनुमति दिनेछ। विवरणका लागि कल गर्नुहोस् 833.737.2583 ext.0।
एन्ट्री लेवल उड़ाउने र बनाउने प्याकेज $ १०,10,500.00००.००
पूर्ण पुनर्स्थापना प्याकेजहरू • $ 41,447.90 • $ 43,447.90 • $ 43,693.15 • $ 54,662.90*सर्वाधिक लोकप्रिय • $ 67,187.00 • $ 75,761.00 • $ 96,810.90
DPF वैकल्पिक फिल्टर सफाई र पुनः भण्डारणको बारेमा जान्नुहोस्
EPA अनुपालन डाटाबेस
© प्रतिलिपि अधिकार - DPF विकल्प